/Blog/LGD-4033 , Ligandrol/Kutheni sithenga i-LGD-4033 / VK5211 / Ligandrol powder kwi-AASraw?
ezaposwa ngomhla 02 / 05 / 2018 by UDkt Patrick Young bha liweyo LGD-4033, Ligandrol.
Yintoni i LGD-4033? Sibizwa ngokuba yiLigandrol. Lo yiModulator ye-Selective Androgen Receptor ephakamileyo ephuhlisiwe ekuncedeni ekuphuculeni inzuzo ye-muscle kunye nokulahlekelwa kweoli. I-LGD-4033 ithathwa ngomlomo, kwaye ayiyi-steroidal. Idibanisa kunye nama-receptors anabolic anika iziphumo ezifanayo kwi-steroids. Nangona kunjalo, iziphumo zecala zihluke ngokupheleleyo kwizo zi-steroids. Ngokutsho kwabaphuhlisi, le mveliso iphakathi kwe SARMS ehambisa iziphumo ezinkulu, kodwa ubukhulu buncinci kuneemveliso phantsi kwoluhlu olufanayo.
I-LGD-4033 yimijelo ye-Androgen Receptors. Ezi ntlobo zeelandi zikhetha ukukhetha xa zikhetha izicubu ukudibanisa. Ziye zaphuhliswa ukunciphisa ukuphelelwa kwemisipha edibeneyo nezifo ezingapheliyo kunye nezifo, umhlaza, kunye nokulahleka kwemisipha ngenxa yokuguga.
I-LGD inokubuyisela ukubuyiswa kwemisipha, njenge testosterone, ngelixa liqinisekisa ukhuseleko lomsebenzisi. Indlela yokukhethwa kwamathambo nokulawulwa komlomo yenza le mveliso ibe yinto enhle esebenza kakuhle emzimbeni.
Kuye kwafundwa ukuba le SARM malunga ne-98% ecocekileyo kunye nomxholo ongekho phantsi. Ngokomphandi, imveliso iqulethe isakhiwo esicocekileyo esiqinisekisa umsebenzisi wentsebenzo enhle emva kokuyisebenzisa.
I-LGD-4033 inkcazelo ye powder eninzi
I-LGD-4033 powder, luhlobo oluthile lwe-crystal powder. Njengoko i-LGD-4033, i-LGD-4033 ipow powder enye ye-LGD-4033 i-powder bulk enye yokuthengiswa okutshisayo phakathi kweearms, kungekhona nje ngenxa yeendleko ze-LGD-XNUMX, ukuhlambuluka ye-LGD-4033 eluhlaza, ewe, ukuba ndizithenga i-LGD-4033 powder eninzi, okanye i-labor use, ndikhetha bathenge i-LGD-4033 eluhlaza kwi-intanethi, khetha umthengisi wePDD-4033 othembekileyo kwaye ugcine ulwalamano oluzinzileyo. Iinkcukacha ze-LGD-4033 inkcazo ye powder eninzi AAS njenge:
Igama: LGD-4033 / VK5211, iLigandrol
I-Formula ye-Molecular: C14H12F6N2O
I-Melt Point: 105 - 106 ° C
Umbala: Khupha i-white Crystal Powder
Ukusetyenziswa kwezonyango kwe-LGD-4033
I-LGD-4033, njengawo onke ama-SARM, yayilungiselelwe ngokusesikweni ukuba i-muscle ichithe ukukhusela. Nangona kunjalo, linakho ukukwazi ukulwa nomdlavuza, kwaye unceda abantu abadala ukuba babe namandla kunye nezihlunu.
Iinzuzo ze-LGD-4033 abanxibe impahla
1. Ukwanda kweMiscle Mass
Ukugqwesa ngokugqithiseleyo kweLigandrol bubunzima bomzimba buchaphazela ukuba umdlali uya kufumana. Ngokuxhomekeke ekudleni umsebenzisi oqhelekileyo unokufumana i-5-10 lbs yobuninzi bomzimba kwisigidi se-8-12 yeveki. Kukho iingxelo zabasebenzisi abafumana uninzi lwe-muscle kunye neqondo eliqhelekileyo le-10mg ngosuku.
2. Ukwandiswa kwiMandla
I-Ligandrol iya kwandisa amandla abasebenzisi ngokugqithiseleyo ngaphandle komjikelezo. Oku kuhle ukuphula iiplani kwiiphakamiso okanye ukuzuza kwamandla onke ekusebenzeni. Abasebenzisi babika ukufumana amandla okuthintela kwiiveki ze3 okanye kungekudala. Ukuthetha ngamava, ndakuziva ngeveki ye2. Ngokukodwa kwinqanaba lam liphakamisa njenge-bench press kunye ne-shoulder bulb presses.
3. Ukulahleka Kwempahla & Hhayi Umzimba Ukunciphisa
Njengoko kushiwo ngaphambili, iLigandrol yayenzelwe ukuyeka ukuxhatshazwa kwezidumbu. Le nkulu kunye nabani na abajongeyo ukwenza umjikelezo wokusika. Ngokuqhelekileyo ekudleni ukutywala umsebenzisi ulahleka kwekharori kwaye unokubeka umngcipheko wokulahleka kwemisipha. Nge-LGD-4033 enokuthi kwenzeke, ngokwenene kuya kukunceda ukwandisa ubunzima besisundu nje ngokwenza umjikelezo weveki ye-8. Kuyavunywa kuya kuba yinto enkulu, kodwa ngokuqinisekileyo umele ubone umehluko.
4. Enkulu yoKuhlaziya
I-Ligadrol ikhanya ngokukhanya kwi-body recomp. Ngokutya okufanelekileyo kunye neendlela zokuqeqesha. I-Ligandrol iya kwongeza inani elihle lomzimba ngaphandle kokungena nayiphi na ifuthe yomzimba. Ukususela kwam namava, oko kusebenza kakuhle kunye ne-S4 okanye i-RAD140. Isixa semisipha esongeziweyo kunye nobunzima obuya kufumana kunye neyiphi na i-SARM ezikhankanyiweyo.
5. I-Alternative kwiSteroids
I-LGD-4033 ilula iiSARM ezidumileyo kakhulu. Oko kuthethwa ngabo abangafuni ukuthatha inyathelo ekuthathe i-anabolic steroids, esi sisisombululo esikhulu kuwe. Gcina ukhumbule ukuba le nto iya kukunika imiphumo eqhelekileyo eyenziwa yi-steroids, kodwa yimiphumo esondeleyo oyifumanayo kwi-AAS.
Iinzuzo ze-LGD-4033 powder
Xa uthengela i-LGD-4033 capsule kwivenkile yasekuhlaleni, isilwanyana saqhutyelwa, ukungcola kangako, okanye xa uthenga i-LGD-4033 powder ezweni lakho, okanye ucoceko buhle kakhulu, okanye uxabiso luphezulu kakhulu. I-LGD-4033 ipowder online, unokufumana kalula i-LGD-4033 ifowuni enobumba obudayisiweyo, ukuhlanjululwa kwempahla abayinike yona ngokuqhelekileyo ibakala leyeza, ngoxa umfumene umthengisi we-LGD-4033 othembekileyo, ngenxa yoko, siza kuthetha kamva .
Njengoko i-intanethi iyaxolisa, ukuthenga i-LGD-4033 powder kwi-intanethi iba yinto elula ngakumbi kwaye iqinisekisiwe, unokukhetha iimveliso ofuna ukuzincama, kunye nexabiso libiza ngexabiso elifanelekileyo, yenye yezona zizathu zokuba abantu bathenge i-LGD-4033 powder kwi-intanethi.
Okubaluleke ngakumbi, ngelixa uthabatha ukwakha umzimba, kwi-peroid eyahlukeneyo, uya kuthatha iilitha ezahlukeneyo, ngoko unokugqiba ukuba ungayisebenzisa kangakanani, ngokwakho.
Indlela yokwenza i-LGD-4033 powder?
I-LGD-4033 isebenzayo ngamanani aphantsi nje ngo-5 mg ngosuku, kodwa i-dose "spot sweet" yi-10 mg ngosuku.
Uvavanyo lwezonyango luye lwaphakama njengo-20 mg + ngosuku kwaye akukho miphumo engathandekiyo embi, ngoko ukuba isihloko sakho sophando siva kakuhle nge-10 mg unokukhetha ukwandisa umthamo wexesha elidlulileyo.
Andiyi kudlula ubuninzi be-20 mg ngosuku.
Ubude bomjikelezo ophakanyisiweyo yii-8-12 iiveki. Uya kufumana ukubuyiswa kwehliswa kwexesha le-12.
Isiqingatha sobomi be-LGD-4033 ngama-24-36 iiyure ngoko kuphela kufuneka usebenzise i-LGD-4033 enye ngosuku.
Akunandaba nokuba unesisu esingenalutho okanye kungekhona xa usenza umthamo.
Kodwa ekubeni ukunyamezela komzimba wonke kuhlukile, unokuzilungelelanisa ngokwakho, i-dosage yenzelwe iireferensi.
Kukho iindlela ezimbalwa zokubeka i-LGD-4033, ngamnye kubo ehambisa iindidi ezahlukeneyo kumdlali.
1. Ukukhwabanisa: I-LGD iyona nto i-SARM efanelekileyo kwiklasi xa ifika ekuhlaleni, kwaye i-10mg ngosuku ngeeveki ze-8 iya kuba ninzi njengoko iqhutywe yodwa. Nangona kunjalo, abanye abadlali abanomdla baya kuphakama njenge 15 okanye 20mg ngosuku. Ngexesha lomjikelezo wokubhukuda kunye ne-LGD kubalulekile ukuqinisekisa ukuba ukhupha iikholeji kunye nesisindo somzimba ubuncinane ubuncinane be3-4 ngamaxesha ngeveki.
2. Ukulahleka kwempahla: I-stack efanelekileyo yokusika izakuhlanganisa i-LGD kwi-5mg ngosuku ngemilinganiselo ephakathi ye-S4 ne -arine kunye ne-GW cardarine. Ukusebenzisa i-LGD ngokwayo akukhuthazwa ukusika, kuba kufuneka isebenze ngokusebenzisana namanye ama-SAR kule njongo.
3. I-Anabolic stteroid stack: I-LGD inokuthi ithathelwe njengengxenye yomjikelezo wakho we-anabolic steroid ukwenzela ukuba ungeze i-muscle ezuzekileyo kunye namandla ngaphandle kwemiphumo eyongezelelweyo. Ngenxa yoko, unokongeza phakathi kwe-3 kunye ne-15mg ngosuku lwe-LGD kwisijikelezo sakho steroid.
4. Ukubuyisela kwakhona: Ukubuyiswa kwakhona kwenziwa ngabo bafuna ukongeza isisundu somzimba kunye nokutshisa amafutha omzimba ngexesha elinye. I-LGD intle kakhulu kule nto xa iqhutywe ngokubambisana nekhadiarine, ukutya okunzulu, i-cardio nokuqeqesha umzimba.
5. I-SARM i-bridge stack: i-LGD isetyenziswa ngokuqhelekileyo kwibhulorho kunye ne-S4 ukunceda i-mantain inzuzo kunye namandla ngaphakathi kwimijikelezo ye-steroid. Qalisa i-3-5mg ngosuku lwe-LGD, kunye neqondo elilinganayo le-S4 kunye ne-HCGenerate ES. I-LGD ayifanele isetyenziswe ngexesha lonyango lwe-post cycle (PCT).
Imiphumo engaphantsi kwe-LGD-4033
Ngokusetyenziswa kwezifundo kunye neengodo, iimiphumo ezisuka kwi-LGD-4033 zize ziboniswe ukuba zingancinci. Azikho iziphumo zecandelo ezaziwayo ngaphandle kokuba kunokwenzeka ukunciphisa i-testosterone. Kulula ukubuyiswa nge-mini-PCT emva komjikelo wakho we-LGD-4033 kwaye akukho nto ixhalabisa ngayo. , kodwa oku kulawulwa lula ngokuthatha i-capsule enye ye-Arimi-RX PCT kunye ne-LGD-4033 yakho kwimihla ngemihla.
Ukuncitshiswa kwe-LGD ye-4033 kubonisiwe kuxhomekeke kumthamo, kodwa kuye kwaba nokuhla kwe-testosterone kunye nese-SHBG. Ezi ziphumo ezithandekayo zibonise ukuba akukho ukuhla kwexabiso kwi-LH okanye kwi-FSH. Oku kubakhuthaza kakhulu kubasebenzisi njengoko kubonisa ukuba ngelixa ukunyanzeliswa, ukubuyisela akusayi kusondela ixesha elide kunye ne-anabolic steroids. I-LGD-4033 ayinayo i-toxic and effects effects have been mild to minimal. Ayibonanga ukwanda kwe-estradiol, kodwa, njengawo nayiphi na into, i-inhibitor ye-aromatase kufuneka igcinwe ngesandla.
I-pct epheleleyo, ngokuchasene ne-mini pct kunye namanye ama-SARMS, icetyiswa emva komjikelezo we-LGD-4033. Nangona kungenako ukunyanzelisa njengama-anabolics, ukuxhaswa kukuphakamileyo kunamanye ama-SARMS, ngaloo ndlela, efuna i-PCT epheleleyo.
Kutheni uthenge i-LGD-4033 powder kwi-AAS nkampani?
I-AASraw ye-Biochemical Technology Co. yahlelwa kwakhona yi-Shanghai yase-Shanghai yaseBlookystem Engineering Laboratory e-2008, eyakhiwa yi-5 yaseTshayina Ph. Oogqirha, abaphakanyisiwe kwi-Khemishini yobunjineli kwiYunivesithi yaseTulsa, e-Oklahoma, eU.SA. Imveliso ephezulu: i-anabolic steroids i-powder eluhlaza , ukwakha umzimba, ukuqina, ukulahlekelwa ngamafutha, i-hormone zesondo, ii-SARMS, iziyobisi ze-PCT, i-HGH, homebrew, ugl.Kubani abantu abaninzi bathengela i-LGD-4033 powder kwi-AAS? Isizathu sifana:
1. Umgangatho ophezulu ngexabiso lokukhuphisana:
1) Umgangatho: I-Standard Standard
2) Bonke Ubungcwele> 99% steroids powder eluhlaza
2. Ukuziswa okukhawulezileyo nangokukhuselekileyo:
3 Sinabathengi kwihlabathi lonke:
I-3) Umgangatho ophezulu, intengo yokukhuphisana, ukuhanjiswa okukhawuleza, inkonzo yokuqala yokufumana ithemba kunye nodumo oluvela kubaxumi
tags: bathenge i-LGD-4033 powder, bathenge i-Ligandrol powder, I-LGD-4033 powder, Ligandrol powder
Thenga i-meridiya powder online: Izinto ze-6 omele uzi!	Thenga i-RAD140 powder online: Iifayili ze-8 kufanele wazi !!!